အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး | Page6| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
13.2.2018 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
အရေးပေါ် သန္ဓေတားဆေးဆိုတာ ဆေးသောက်ဖို့ မေ့သွားတာ၊ ကွန်ဒုံးသုံးဖို့ မေ့သွားတာလိုမျိုး အရေးပေါ် အခြေအနေအတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အသုံးပြုဖို့...
12.2.2018 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
အရေးပေါ် သန္ဓေတားဆေးဟာ အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် 72 နာရီအတွင်းမှာ သန္ဓေတားဆေးအနေနဲ့ သောက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Norlevo 1 လုံးကို အတူနေပြီး 72...
ရင်သားတွေကို ကာကွယ်ဖို့ရာ ကိုယ်တိုင် ပုံမှန်စစ်ဆေးပါ
2.2.2018 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
1. မှန်သားပြင်မှာ ကြည့်ရှုပါ။
မှန်ကြီးကြီးတစ်ချပ်ရှေ့မှာ ရင်သားနှစ်ဖက်စလုံးကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပေးသင့်ပါတယ်။ ရင်...
31.1.2018 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ချစ်တင်းနှောပြီးခါစမှာ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အပြောင်းအလဲလေးတွေကို တော်ရုံတန်ရုံ သတိပြုမိကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အတူနေပြီးခါစ...
28.1.2018 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
အမျိုးသမီး ၇၅%လောက်ဟာ အတူနေစဉ် နာကျင်မှု ခံစားရတတ်ပါတယ်။ နာကျင်ခြင်းဟာ ယာယီမ...
တားဆေးသောက်နေရင်း ဘာကြောင့် ကလေးရ,ရတာလဲ?
25.1.2018 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
တားဆေးတွေဟာ ကလေးမရအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ် ဆိုပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံ မထင်မှတ်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရှိသွားတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလို တားဆေးသောက်ရင်း ကလေး...
2.1.2018 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှု အထူးသဖြင့် oestrogen ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုက သားအိမ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေများတဲ့ အဓိကအချက်ပါပဲ၊ ဖြစ်နိုင်ချေများတဲ့အချက်တေ...
ပျိုမေတို့ရဲ့ ကိုယ်စိတ်နှလုံး သုံးပါးစလုံး ကျန်းမာစေဖို့အတွက် သိထားသင့်သောအချက်များ
30.12.2017 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ကိုယ်စိတ်နှလုံး သုံးပါးစလုံး ကျန်းမာစေဖို့အတွက် မှန်ကန်တဲ့ အစားအသောက်ပုံစံ၊ လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ကျစေတဲ့ အစီအစဉ်အားလုံးက အရေးကြီးတဲ့...